Network ကနေ ပွားတဲ့ Kido virus ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။ - MYSTERY ZILLION
Network ကနေ ပွားတဲ့ Kido virus ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။
February 2009 edited April 2010 in Antivirus & Virus
Net-worm.win32.kido.ih ဆိုတဲ့ virus Network ထဲကို ဝင်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုသတ်သတ် ပြန်ပွားပါတယ်။ Kido Killer နဲ့ သတ်လည်းမရပါဘူး။ Kaspersky လည်း မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီ virus ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ services တွေကို လိုက်ပိတ်ပစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- Windows Audio, Server, Workstation စတဲ့ service တွေကို ပိတ်ပစ်ပါတယ်။ virus သတ်နေတာ Tools လည်း စုံသွားပါပြီ။ သူ့ကို Conficker, Downadup စသဖြင့်လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ virus က .dll တွေကို random အနေနဲ့ လုပ်ပါတယ်။ C:\_Documents and Settings\_ အောက်မှာ Local Service, Network Service ဆိုပြီး folder ၂ ခုရှိပါတယ်။ system32 အောက်မှာ hnemaa.dll ဆိုတဲ့ file လည်း ဖျက်လို့မရဘူး။ safe mode ကနေ ဝင်ဖျက်လည်း မရပါ။ အခုနောက်ဆုံး cafezee ပါ Clients တွေမပေါ်တော့ဘူး။ ကူညီကြပါဦးခင်ဗျား။
Delete the following system registry key: [HKLM\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Services\_netsvcs]
Delete “%System%\_<rnd>.dll” from the system registry key value shown below: [HKLM\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_SvcHost]
Delete copies of the worm: %System%\_<rnd>dir.dll
%Temp%\_<rnd>.tmp <rnd> isarandom string of symbols.
Delete the files shown below from all removable storage media: <X>:\_autorun.inf
Download and install updates for the operating system: http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-067.mspx Update your antivirus databases and performafull scan of the computer (downloadatrial version of Kaspersky Anti-Virus).
အထက်ပါအတိုင်းစမ်းကြည့်ပါဗျား... ကော်ပီကူးယူဖော်ပြပါသည်။ထို ဗိုင်းရပ်အကြောင်း အသေးစိတ်ကိုအောက်ကလင့်မှာဖတ်ရန်...
အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပနော်... အဲဒီ virus ကိုလက်တွေ့မကြုံဖူးလို့ပါ...
အထက်ပါ... ကပ်စပါစကီး ဖိုရမ်မှာလည်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးချက်များရှိပါတယ်...
နောက်ဆုံးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ရင် အကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ် system restore လုပ်လိုက်ပါ...ဘာမှမဖြစ်တဲ့နေ့က date ကိုရွေးပြီး system restore လုပ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးတင် သရက်မြို့ virus ဝင်နေလို့အဲဒီနည်းနဲ့အဆင်ပြေခဲ့လို့ပါ...
ကိုညရေ .. system restore လုပ်တာ ကို တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပါလားဗျာ ..
start =>help and support=>system restore => restore my computer to early time =>အဆင်ပြေမယ်. date ကိုရွေး =>next ++++++(for XP)
restore လုပ်ပြီးရင် restore ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာပြောပြပါဦး။
အကို လေး နောက်တမျိုးပြောင်းမေးကြည့်(မရှင်းလို့)
အရမ်းကောင်းတဲ့ topic လေးပါ .......။
ဒီ Virus က တော်တော်လေး ဆိုး လာပြီ။...ကျွန်တော် တို့လဲ ဆွေးနွေး သင်. တယ်....
တတ်သိနားလည် သူများ ပါဝင် ဆွေးနွေး ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ် အပ် ပါတယ် ခင်ဗျာ
To remove the virus locally:
1. Download the archive KidoKiller_v3.3.2.zip and extract the contents intoafolder on the infected PC.
2. Run file KidoKiller.exe
When the scan is over an active window of the command prompt may be displayed on your computer monitor, in order to minimize the window press any button. For the window of the command prompt to close automatically it is recommended to run the utility KidoKiller.exe with the the parameter вЂ“y.
If Agnitum Outpost Firewall is installed on the computer where the utility KidoKiller.exe is launched, in this case it is obligatory to restart your PC once the work of the utility is over.
4. Perform full scan of your computer with your Kaspersky Anti-Virus
Kyspersky တင်ထားတယ်ဆိုရင် Kidokiller.exe ကိုစမ်းကြည့်ပါလား......
Removal Tools မျိုးစုံ သုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Acronis နဲ့ Windows ကို Image ရိုက်၊ Deep Freeze ကို စက်တိုင်းမှာတင်နေပါတယ်။ ပွဲတိုင်းကျော်ခဲ့တဲ့ Kasper တော့ ဒီတစ်ပွဲမှာ လုံးဝ အရှုံးပေးလိုက်ရပါပြီ။ Kasper က အဲဒီ virus ကို မသတ်နိုင်ပါဘူး။ Skip ပဲလုပ်ခိုင်းနေပါတယ်။ Kasper က ထုတ်တဲ့ Kido Killer ကလည်း မသတ်နိုင်ပါဘူး။ အခြား tools တော်တော်များများလည်း မရပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ စက်တိုင်းမှာ Deep Freeze တင်တာပါပဲ။ Restart ချလိုက်တာနဲ့ အားလုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာ သုံးတဲ့လူတွေတော့ Deep Freeze မသုံးပါနဲ့။ ဆိုင်သမားတွေ အတွက်တော့ Deep Freeze က ကောင်းပါတယ်။
Symantec ရဲ့ W32.Downadup Removal Tool နဲ့ သတ်ကြည့်ပါလား... ကျတော်တော့ အဲဒါနဲ့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်... စစ်တဲ့အခါ Safe Mode နဲ့စစ်ပါ... network ထဲရှိ စက် ၁-လုံးမကျန် လိုက်စစ်ပါ... ကျတော်တို့ ရုံးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅-ရက်လောက်က ဝင်တာ မနေ့ကစပြီး stable ဖြစ်သွားပါပြီ...
အစ်ကိုေ၇ အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဘယ်လိုသတ်လည်း ဆိုတာသေချာရှင်းပြ ပါလားဗျာ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာ အဲ့ဒီအကောင့် ၀င်နေတာ တော်တော် ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာ နက်၀က်တွေ ပိတ် အသံတွေပိတ် ဟိုဟာလည်း မနိုင်ဒီဟာလည်း မနိုင်နဲ့ ဒါကြောင်းကျေးဇူးပြုပြိး အစ်ကိုသတ်လိုက်ပုံကိုသေချာလေးရှင်းပြပေးပါလား း)):77::77:
Kav နဲ့ သတ်တာ ရတယ် ဒါပေမဲ့ Folder တွေက Hiddenဖြစ် နေတယ်
Properties ခေါ်ကြည့်တော့ Hidden ကို check ပြန်ဖြုတ် လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်
ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲ .....ကူညီကြပါအုန်း:((
ဒါလေးကို run ကြည့်ပါလား
hidden ဖြစ်သွားတဲ့ဖိုင်လ်တွေကို ဒါလေးနဲ့ဖော်ကြည့်လိုက်ပါ။ install ပြီးတာနဲ့ ဖော်ချင်တဲ့ Drive တွေကို Right click ထောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင် Change Attributes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး အဆင်ပြေသလိုအသုံးချလို့ရပါပြီ။
install လုပ်ပြီး Shortcut ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်မှာဆိုးလို့ပါ။